Kuba ukunciphisa umzimba kuya kusiba nzima nangobudala Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
1 Kuba kunzima ngakumbi ukunciphisa umzimba xa umdala
2 Ukusukela kwiminyaka engama-30
3 Ukusukela kwiminyaka engama-40
4 Ukusukela kwiminyaka engama-50
Kuba kunzima ngakumbi ukunciphisa umzimba xa umdala
Ukwaluphala yinkqubo yendalo. Ngayo, umzimba uyatshintsha kwaye iimpawu zokuhamba kwexesha ziyabonakala ngakumbi kulusu kwanakwinwele. Ngaphakathi, iinguqu ziyenzeka.
Olona tshintsho luphambili liqondo lakho le-basal metabolic, elicothayo kule minyaka idlulileyo. Oku kuthetha ukuba kukho ukuhla kwenani leekhalori ezitshisiweyo ekuphumleni.
Ke ngoko, kuya kusiba nzima ukunciphisa umzimba ngobudala, kwaye kuyinto eqhelekileyo ukugqitha iminyaka engama-30 kwaye uqaphele ukwanda kobunzima, ngaphandle kokuqhubeka nokutya into enye.
Siyazi ukuba ukuguga kwahlukile kumntu ngamnye, kuyinto eyodwa. Lo mahluko unokuba ngumzimba, ufuzo, inkcubeko, isini, indlela yokuphila kunye nenqanaba lentlalo noqoqosho.
Ukusukela kwiminyaka engama-30
Ngokwesiqhelo, umntu uqaphela ubunzima bokulahla ubunzima kunye nobudala ukusukela kwiminyaka ye-30, kulapho amanqanaba ehomoni aqala ukuncipha, anokuba negalelo ekuzuzeni ubunzima okanye enze kube nzima ukunciphisa umzimba.
Yonke iminyaka elishumi, imetabolism iyancipha phakathi kwe-2 kunye ne-5%.
Ukongeza, njengoko inkqubela phambili yobudala, kukho ilahleko yobunzima bemisipha, eqhubeka iphazamisa ukusebenza kwemetabolism.
Ingcebiso kukwenza umsebenzi onamandla ngakumbi wokutshintsha amanqatha ngobunzima obucekeceke, oku kunceda ukugcina inqanaba lokunciphisa umzimba lijongile.
Kubalulekile ukuba uhlengahlengise uhlobo lokondla. Kunganyanzeleka ukuba ubandakanye okanye ususe okunye ukutya ekutyeni okanye unciphise inani leekhalori ezifakwe imini yonke.
Ukusukela kwiminyaka engama-40
Kweli qela leminyaka, ukuhla kwesisindo kunye nokwehla okukhulu kwehomoni kuhlala kwenzeka, okuchaphazela inkqubo yokwehla kobunzima. Isidingo senkqubo esempilweni enesondlo esifanelekileyo kunye nomsebenzi womzimba uyanda.
Umzimba uthambekele ekunciphiseni ibango leekhalori, ke kubalulekile ukuba utshintshe indlela otya ngayo.
Ukuba ukuya exesheni kuyeza, tyala imali ekutyeni okufana nembewu yeflakisi kunye neembotyi zesoya. Banegalelo kutshintsho lwehomoni.
Ukusukela kwiminyaka engama-50
Ngokufika kweminyaka engama-50, ukuthoba izandla kwizikali kuba ngumceli mngeni omkhulu ngakumbi.
Ukuyeka ukuya exesheni phantse kukhuselekile kubafazi abaninzi, ke lixesha lokujonga ukutya okusebenzayo ukuzama ukukhawulezisa imetabolism yakho.
I-calcium nevithamini D zibalulekile ekuqinisekiseni amathambo asempilweni kunye nokuthintela i-osteoporosis.
Fumana imithambo ye-aerobic, kodwa uye uye kuqeqesho lobunzima ukugcina kunye nokufumana ubunzima obukhulu. Khumbula: izihlunu onazo, ngokukhawuleza imetabolism yakho iyakwenza, ukwenza ulondolozo lube lula